» “मोहम्मद हकीम, मृत्यु प्रकरण- गृहमन्त्री,खाणले यस्तो कदम!चालेपछि जिप्रका, सुनसरी थुरुरु, अब के हुन्छ ? “मोहम्मद हकीम, मृत्यु प्रकरण- गृहमन्त्री,खाणले यस्तो कदम!चालेपछि जिप्रका, सुनसरी थुरुरु, अब के हुन्छ ? – हाम्रो खबर
“इटहरी । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीको बन्दी गृहमा भएको मृत्यु प्रकरणबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ। सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाका मोहम्मद हकीम साहको बन्दी गृहमा मृत्यु भएको थियो।”
“गृह मन्त्रालयमा आइतबार मुस्लिम समुदायसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो काम रहेको बताए।”
“उनले सामाजिक सद्भाव कायम गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सरकार र आफू संवेदशील रहेको बताए। सबै नागरिक आफ्नो धर्म संस्कृति अवलम्बन गर्न स्वतन्त्र रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा भएको त्यसमा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए।”
“ज्ञापनपत्रमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिलाई भङ्ग गरी उच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा मानव अधिकारकर्मीसहितका विज्ञ टोली गठन गर्न माग गरिएको छ।”
“गृहमन्त्री खाणले स्थानीयले विश्वास गर्ने गरी अहिलेको छानविन समितिका सदस्यलाई फेरबदल गर्ने विषयमा कुराकानी भएको जानकारी दिए। यसैबीच महोत्तरीमा दशैंको समयमा बोक्सीको आरोपमा एक महिलाको ह त्या भएको छ भने अर्की एकलाई मलमुत्र खुवाएर दु र्व्यवहार गरेको खुलेको छ ।”
“महोत्तरी गाउँपालिका ३ मडई बस्ने सञ्जय झाले २७ असोजमा भाउजु शिलादेवीको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । शिलादेवी, देवर सञ्जय र देवरानी रिंकुसँगै बस्दै आएकी थिइन् । गत असारमा सञ्जयसँग बिहे गरेकी रिंकुसँग गर्भवती थिइन् ।”
“गर्भपतन भएपछि संजय जनकपुधरामस्थित रिंकुको हजुरआमाको घरमा बस्न थाले । त्यहाँ बस्दा पनि रिंकु बेलाबेला विरामी भइन् । अस्पतालमा चेकजाँच गराउन रोग पत्ता नलागेको भन्दै सञ्जयले पत्नी रिंकुलाई झाँक्री कहाँ लिएर गए ।”
“त्यस क्रममा रिंकु काम्न थालेको र आफूलाई शिलादेवीको दिवंगत छोरा कृष्णा हुँ भनेको सञ्जयको दाबी छ । त्यही कारण सञ्जयले भाउजुमाथि बोक्सीको आरोप लगाए र २७ असोजको साँझ ५ बजेतिर जनकपुरबाट साइकलमा मडईस्थित आई घरमा सुतिरहेकी शिलादेवीको हथौडा प्रहार गरी ह त्या गरेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । भाउजुको ह त्यापछि उनी जनकपुर फर्किएका थिए ।”
“महोत्तरी प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक रञ्जन मिश्रले भने, ‘उनलाई मारेपछि मात्र परिवार सुरक्षित हुन्छ भन्ने अन्धविश्वासको कारण शिलादेवीको हत्या गरेको देखिन्छ ।’ भाउजु शिलादेवीलाई सापटी दिएको १२ लाख ३९ हजार फिर्ता पनि नदिएको सञ्जयको दाबी छ । शिलादेवीको ह त्या भएकै दिन सदरमुकाम जलेश्वरमा एक महिलामाथि दु र्व्यवहार भएको छ ।”
“जलेश्वर नगरपालिका–४ सुगा ४२ बर्षीया महिलामाथि बोक्सीको आरोपमा दु र्व्यवहार भएको प्रहरीले जनाएको छ । स्थानीय सिकिन्दर महतो सहितको समूहले उनलाई बोक्सीको आरोपमा कुट पिट गरी मलमुत्र खुवाउनुका साथै केश मुण्डन गरेको पाइएको महोत्तरी प्रहरी प्रमुख एसपी दिनेश आचार्यले जानकारी दिए ।”
“सिकिन्दरसहित चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सिकिन्दर उनकी ३२ बर्षीया पत्नी पुरनी देवी, स्थानीय ६५ बर्षीया पत्नी प्रमिला देवी महतो र उनका २० बर्षीय छोरा अनिललाई पक्राउ गरिएको महोत्तरी प्रहरीले जनाएको छ ।”